Shabaab oo qabsaday saldhig cidamada dowladda ku leeyihiin Daynuunay. | XAL DOON
Home NEWS Shabaab oo qabsaday saldhig cidamada dowladda ku leeyihiin Daynuunay.
Shabaab oo qabsaday saldhig cidamada dowladda ku leeyihiin Daynuunay.
Dagaal culus ayaa saaka ka dhacay saldhigga ciidamada dawladda Soomaaliya ee Daynuunay kadib markii weerar culus ay kusoo qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabab, sidaasi waxaa sheegay ilo dhinaca amniga ah.
Dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hub culus, waxaana wararka dhinaca amnigu sheegayaan in Al-Shabaab ay saacadihii hore ee saaka galen saldhigga, inkastoo goor dambe ay ciidamo gurmad ah xoojiyeen kuwa dawladda islamarkaana dib u qabsadeen saldhigga.
Ugu yaraan shan askari ayaa ku dhimatay weerarka oo uu ku jiro taliye ka tirsan ciidanka. Saddex ka mid ah ciidanka ayaa la sheegay inay ku dhinteen miino la qaraxday xilli ay gurmad ugu sii socdeen saldhigga.
Mas’uuliyiinta amniga ayaa sheegayey inay khasaare gaarsiiyeen Al-Shabaab iyadoo faahfaahin aysan weli soo bixin
Daynuunay ayaa ah saldhig milatari oo 1KM u jra magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay.